१५ देखि ३० मिनेटभित्र सङ्क्रमण पत्ता, ६ महिनाभित्र १२ करोड परीक्षण गरिने - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः केही मिनेटभित्रै कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुष्टयाउने प्रविधिको विकास भएको छ । न्यून र मध्यम आय भएका राष्ट्रमा सङ्क्रमित पत्ता लगाएर कोभिडविरुद्धको लडाईंमा क्षमता विस्तार गर्न नाटकीय परिवर्तन आउने विश्व स्वास्थ्य संगठनले दाबी गरेको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री र पूर्बाधारको अभाव तथा प्रयोगशाला व्यवस्थित नभएका राष्ट्रमा उक्त प्रविधिको प्रयोग गरी कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पत्ता लगाउन सहज हुने संगठनले जनाएको छ । उत्पादकसँगको सहमतिमा आगामी छ महिनाभित्र कम्तीमा १२ करोड परीक्षण गरिने विश्व स्वास्थ्य संगठनले उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रबिधिको प्रयोग गरी परीक्षण गरेमा प्रति परीक्षण करिब पाँच सय रुपैैैंयाँ खर्च हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।
स्वावका लागि नमूना दिएपछि परिणाम जानकारी पाउन लामो समय पर्खिँदा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा राख्न न्यून र मध्यम आय भएका राष्ट्रले ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डा. टेड्रस अदनोम गेब्रेससले १५ देखि ३० मिनेटभित्र उक्त प्रबिधिले सङ्क्रमणको अवस्था निक्र्योल गर्ने बताए ।
याे पनि पढ्नुस चिनियाँ राष्ट्रपति सीद्वारा कोभिड-१९ विरुद्धको लडाईका मोडेलहरुको प्रशंसा
डा. गेब्रेससले बिल एण्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशनसँगको सहकार्यमा अबोट्ट र एसडी बायोसेन्सरले १२ करोड ब्यक्तिमा परीक्षण गर्न सकिने गरी किट उत्पादन गर्ने सहमति गरेको जानकारी दिए । उक्त सम्झौतामा करिब १३३ राष्ट्रका लागि आपूर्ति गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
डा. गेब्रेससले भने, ‘सङ्क्रमण उच्च हुने, प्रयोगशालाको सुविधा नहुने र स्वास्थ्यकर्मी पुग्न असहज हुने स्थानमा यसले परीक्षणको दायरा बढाउनेछन् ।’
ट्याग्स: कोभिड–१९, डा. टेड्रस अदनोम गेब्रेसस, विश्व स्वास्थ्य संगठन